एकसाता नबित्दै फेरि अर्काे महिलालाई जलाइयो, श्रीमान फरार - Everest Dainik - News from Nepal
एकसाता नबित्दै फेरि अर्काे महिलालाई जलाइयो, श्रीमान फरार
काठमाडौं, बैशाख १३ । धनुषामा एक महिलालाई जिउँदै आगो लगाएर मार्ने प्रयास भएको एक साता नबित्दै सिरहामा फेरि त्यस्तै घटना भएको छ।
सिरहाको सिरहा नगरपालिका वडा नं. ८ का बेचन मण्डलकी श्रीमती २१ वर्षीया कञ्चन मण्डललाई मट्टितेल छर्केर आगो लगाइएको हो ।
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार हुन नसकेपछि उनलाई काठमाडौं रिफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । कञ्चनको शरीरको ८० प्रतिशत भाग जलेको र अवस्था गम्भीर रहेको सिरहा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव खरेलले जानकारी दिए।
तर कञ्चनलाई कसैले आगो लगाइदियो वा आफैंले आगो लगाइन् भन्नेबारे एकिन नभएको प्रवक्ता खरेलको भनाइ छ । ‘दुई खालका कुरा आएका छन्, अरूले आगो लगाइदिएका हुन् कि उनी आफैंले भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन, अनुसन्धान गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘उनका सासू तथा छिमेकीलाई ल्याएर सोधपुछ गरिरहेका छौं, श्रीमान् भने फरार छन् ।’
याे पनि पढ्नुस बिरामीलाई सरकारीबाट निजी अस्पतालमा लैजाने प्रवृत्ति रोक्न माग
अहिलेसम्म कसैले उजुरी नदिएको उनले बताए।
प्रहरीका अनुसार घटना बिहीबार बिहानको हो । स्थानीयले खबर गरेपछि आगोले जलेको अवस्थामा प्रहरीले कञ्चनको उद्धार गरेको थियो । यसअघि यही वैशाख ५ गते धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका १ की २० वर्षीया निर्मला यादवलाई पति मुकेश यादवले शरीरमा मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाइदिका थिए ।
याे पनि पढ्नुस हिलोसहितको वर्षा भएकै हो त काठमाडौंमा ?
अहिले उनको उपचार काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भइरहेको छ। नेपालखबरबाट